जापानमा चक्कु आक्रमण- विश्व - कान्तिपुर समाचार
विद्यालयको बस कुरिरहेकी ११ वर्षीया छात्रासहित ३ को मृत्यु, १८ घाइते
जेष्ठ १५, २०७६ रोयटर्स/एएफपी
कावासाकी — जापानको कावासाकीमा भएको चक्कु आक्रमणमा कम्तीमा ३ जनाको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा विद्यालय जान बस कुरिरहेकी एक ११ वर्षीया बालिका छन् । मृतकमध्ये अर्का ३९ वर्षीय पुरुष छन् ।
जापानको कावासाकीमा मंगलबार भएको चक्कु प्रहारमा ज्यान गुमाउनेलाई समवेदना व्यक्त गर्दै सर्वसाधारण । तस्बिर : एपी
राजधानी टोकियोको दक्षिणको कावासाकी सहरमा गरिएको आक्रमणमा कम्तीमा १८ घाइते छन् । करिब ५० वर्षीय पुरुष आक्रमणकारीले घटनालगत्तै आफैंलाई घाँटीमा चक्कु प्रहार गरेका थिए । उनको अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
टोकियोको दक्षिणतर्फ रहेको कावासाकी सहरमा यस्तो आपराधिक घटना यसअघि विरलै हुने गरेका थिए । अधिकारीका अनुसार आक्रमणको कारण थाहा हुन सकेको छैन ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दुवै हातमा चक्कु बोकेका आक्रमणकारीले एक निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाझ जथाभावी प्रहार गरेका थिए । त्यसलगक्तै एक बसमा चढेका आक्रमणकारीले बसभित्रका केही मानिसलाई पनि दुवै हातले चक्कु प्रहार गरे ।
जापानी समाचार संस्थाले प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार आक्रमणकारीले ‘म तिमीहरूलाई मार्न चाहन्छु’ भन्दै चक्कु प्रहार गरेका थिए । उनको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।
स्थानीय अस्पतालका उपनिर्देशक कियोशी मात्सुडालका अुनसार ११ वर्षीया एक स्कुले बालिका र अर्का ३९ वर्षीय एक पुरुषको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो । अस्पतालका अनुसार आक्रमणमा घाइते १८ को उपचार भइरहेको छ ।
जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले ‘घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आफूलाई निकै रिस उठेको’ बताए । ‘यो निकै दुःखदायी घटना हो,’ उनले भने, ‘म मृतकहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्छु ।’
स्थानीय व्यक्तिहरूले मृतकफ्रति शोक व्यक्त गर्दै आत्रमणस्थलमा पुष्पगुच्छा राखेका छन् । जापान भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
जापानमा मानसिक रोगीहरूको उपचार केन्द्रमा सन् २०१६ मा फूर्व कर्मचारीले चक्कु आक्रमण गरी १९ जनाको ज्यान लिएका थिए । आक्रमणका बेला उनले ‘मानसिक रोगीलाई आफूले अन्त्य गर्न चाहेको’ बताएका थिए । सन् २००१ मा ओसाकाको एक प्राथमिक विद्यालयमा गरिएको आक्रमणमा ८ विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०८:१८
हाम्रो थाप्लाको ऋण नेताहरूले तिरून्
‘मुलुक साढे १० खर्ब ऋण’मा डुबेछ  । नेतृत्वलाई धिक्कार्न मन लाग्यो  ।
खन्चुवा नेताहरू जसले देशको ऋण घटाउनुभन्दा बढाए । आफ्नो घरजम र निजी सम्पत्ति लुकाइ–लुकाइ जोडे । अनि स्थानीय सरकारको नाममा कर बढाएर जनताको पुस्तौंसम्म ढाड सेक्नेगरी चुसे । र अझै पनि यो वा त्यो नाममा चुसिरहेकै छन् । जनताले तिरेको कर अनुसार विकास भएको छैन । न त छन्, कुनै सुविधा । अनि कसरी भयो, देशमाथि साढे १० खर्ब ऋण ? लाज हुनुपर्दैन ?
सोमबार सरकारले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिकीकरणमा डलर महँगिनु र वैदेशिक ऋण बढ्नु लगायत कारणले नेपालीको ऋणभार चुलिएको भनिएको छ । दिनमा हजारौं मान्छे लाखौं ठगिएर विदेशिन्छन् । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति आय १०४७ अमेरिकी डलर छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटेर ३५.९ प्रतिशतमा झरेको छ । गरिबीको रेखामुनि १८.७ प्रतिशत छ । रेमिटान्स २३.४ प्रतिशतले वृद्धि छ । विदेशी लगानी ६.६६ अर्ब छ । निजी क्षेत्रको लगानी ७८.४ प्रतिशत छ । २६ संस्थाको कमाइ ४४ अर्ब छ । तर प्रतिनेपाली ऋण ३६ हजार रुपैयाँ पुगेछ । यो तथ्यांकले मुलुकको अवस्थालाई त्यसै दर्शाउँछ कि हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ । र कसले यो दुर्दशासम्म ल्यायो ।
करको नाममा दिनमा अर्बौं रकम असुली हुन्छ । त्योभन्दा सयौं गुणा रकम बिचौलिया बनेर सम्बन्धित निकायतिरै वैधानिकताको नाममा ब्रह्मलुट गर्छन् । अनि देशलाई ऋणको भार बोकाउँछन् । नागरिक कंगाल बन्दै गएको छ । जति व्यवस्था फेरियो, उतिनै मुलुकको अवस्था जर्जर बन्दै जानु दुःखद छ । खेदजनक छ । नेताहरूको बदमासीका कारण मुलुकले यो दुर्दशा ब्यहोर्नुपरेको हो । ऋण नागरिकको पसिनाबाट होइन, नेता र कर्मचारीहरूले देश लुटेर जोडेको सम्पत्तिबाट तिराउनुपर्छ । नतिरे पापको भारी उनीहरूले नै बोक्नुपर्छ । विश्वास र झुठो खेतीमै बित्न लाग्यो, देशको आस । कसरी भर्ने नागरिक जीवनमा सास ?
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०८:१६